Super Mario Run dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fomba vaovao vaovao | Vaovao IPhone
Raha vantany vao tapitra ny fiheverana ny fandefasana manokana ho an'ny iOS an'ny Super Mario Run, lalao izay ho tonga amin'ny volana martsa amin'ny sehatra Android (ho hitantsika raha misy fividianana ao anaty fampiharana na fividianana tokana 9,99 euro), manana ny orinasa koreana nanararaotra nanavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fampidirana safidy vaovao sy maody lalao. Ireo tovolahy ao amin'ny Nintendo dia nanisy maodely mora vaovao, izay nesorina ny fetr'andro miaraka amin'ny bubble tsy voafetra. Fa ankoatr'izay dia nisy hetsika vaovao nampiana. Mazava fa te hanohy hanao mahasoa ity fampiharana ity ny orinasa iray volana aorian'ny nanombohany, Io dia eo ambanin'ny fampiharana 50 ambony karama indrindra amin'ny App Store.
Ankoatry ny maody mora sy ny hetsika vaovao vaovao, ity fanavaozana ity koa dia mampihena ny isan'ireo Toad izay very raha misy faharesena mandritra ny hazakazaka, manamora ny fandraisana azy ireo. Azo atao ihany koa ny mandray ny valisoa Toad avy amin'ny My Nintendo imbetsaka mba hahafahana mahazo Toad indray raha sanatria ho voafafa ny tahirin-kevitr'ilay mpampiasa.
Vao nanolotra ny valiny isan-taona ny orinasa Japoney, ny valiny izay nanahirana azy tamin'ny antsipiriany raha miresaka momba ny Super Mario Run isika. Araka ny filazan'ny orinasa, ity lalao ity dia sintonina in-78 tapitrisa hatramin'ny nanombohany ny 15 desambra erak'izao tontolo izao. Izy io koa dia miantoka fa maherin'ny 5% ny mpampiasa no nanokatra ny ambaratonga rehetra amin'ny lalao amin'ny alàlan'ny fividianana mividy izay manana vidiny 9,99 euro ary niteraka ahiahy maro teo amin'ireo mpampiasa.
Raha tsy mamaritra ny isany na ny isan-jaton'ny mpampiasa izay efa nividy ny lalao iray manontolo, Nilaza i Nintendo fa nahazo $ 53 tapitrisa mahery ho an'ny Super Mario Run hatramin'ny nanombohany. Herinandro vitsivitsy lasa izay, Nintendo dia nanangana fanadihadiana herinandro vitsivitsy lasa izay teo amin'ireo mpanjifany izay nanontaniany hoe inona no mety ho vidin'ny lalao, inona ny haavon'ny tian'izy ireo indrindra ary raha tian'izy ireo ny ho tohiny. Mazava fa manadihady ny tsena ny orinasa alohan'ny hanombohany amin'ny Android ary alohan'ny andiany faharoa amin'ny lalao ho an'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Super Mario Run dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fomba tsotra vaovao